Apple Inoburitsa iOS 11.3 Beta 2 yeVagadziri | IPhone nhau
Apple ichangotanga iyo yechipiri beta yeIOS 11.3 yevagadziri. Iyi nyowani yekutanga vhezheni inouya angangoita mavhiki maviri mushure mekuburitswa kweshanduro iyi nyowani iyo inosanganisira shanduko dzakawanda uye zvipikirwa zvakati wandei, kunyanya kutarisirwa kutaridzika kwemenyu chaiyo yekutarisa hutano hwebhatiri redu.
Nyowani Animoji, Hutano app kuvandudza Uine mukana wekukwanisa kuendesa yako Health nhoroondo marekodhi (muUnited States izvozvi), kugadzirisa muARKit uye yakareba etcetera ndedzimwe shanduko dzatinogona kuwana mune iyi vhezheni nyowani iyo zvino inogona kutorwa pasi kubva kuhurongwa hwehurongwa kana iwe uine iyo yekuvandudza profile yaiswa. Uye zvakare, tvOS 11.3 Beta 2 yakaburitswawo.
Chii chitsva muIOS 11.3 Beta 2
Izvi ndizvo parizvino shanduko dzatakawana mune yekutanga Beta, isu tiri kuvandudza kune yechipiri Beta kutarisa shanduko uye nekuwedzera nhau kune urwu runyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple Inoburitsa iOS 11.3 Beta 2 YeVagadziri
Mhoro: unogona kutaura nezve zvazvinoita, ndapota. Ndiri kufunga nezve kuisa yeruzhinji betas.
Ndatenda, ndave kuzoyedza.
Kwaziso, uchave uine iyo yekumisikidza purofiti yekumisa?
Jose Fran Ferragud akadaro
Ndine chimiro chekuyedza betas uye hazviite senge kurodha pasi
Pindura kuna Jose Fran Ferragud
Pindura kune praxis
Parizvino, inomhanya chaizvo paiyo iPhone 6s.